Waa maxay bogga ugu horeeya ee SEO ah ee ku saabsan hagaajinta bogga?
Maalmahan, weedha "si google ah wax" ayaa lagu dhex geliyey wareeg ah oo buuxa. Maalin kasta, dadka isticmaala adduunka oo dhan waxay qabtaan wax ka badan 3. 5 bilyan oo baadi-goobis ah oo leh ujeedo ah inay iibsato ama dalbato wax - bioderma photoderm ar spf 50 ingredients. Marka loo eego xogta tirakoobka, qaybta saddexaad ee iibsadayaasha waxay raadiyaan goorta la iibsanayo go'aanka iibka. Badanaa, dadku waxay raadiyaan ka hor intaadan iibsan. Sidaas daraadeed, ganacsatada internetka ayaa leh fursado ay ku kordhin karaan dakhligooda ayna sare u qaadaan wacyigelinta calaamadeynta ganacsigooda internetka. Haddii aadan weli galin meheraddaada internetka, waxaad luminaysaa fursadahaaga daqiiqad kasta.
Si kastaba ha ahaatee, shabakadda internet-ka waa bilawga koowaad ee safar dheer. Nasiib darro, waxaa jira tiro badan oo domiyo ah oo ka baxsan goobaha oo aanay xitaa ka helin xitaa ka joogitaanka joogitaanka internetka. Waxaa lagu sharxi karaa tartan aad u sareeya oo ku yaala suuqa dijitaalka ah oo ah goobaha da 'yarta ah oo si dhamaystiran loo fuliyay oo si adag u dhexjiray boosaska SERP ugu horeeya. Si kastaba ha ahaatee, waxaa haboon in la isku dayo in aad ka faa'iideysato tartamayaasha tartamaya adigoo sii kordhinaya aragtidaada internetka. Xulashada ugu wanaagsan ee kaa caawin kara inaad soo jiidato gaadiidka tayada waa raadinta mashiinka raadinta.
SEO (raadinta mashiinka raadinta) waa hab-raaca bogsashada shabakadda iyadoo la eegayo heerarka raadinta Google si looga dhigo tartan ka dhexeeya goobaha kale. Waxaa jira laba siyaabood oo SEO ah - ku-haynta iyo dib-u-habeynta goobta. On-site waa wax kasta oo la xidhiidha waxyaabaha aad boggaaga ku hagaajinayso sida qoraalka content, interlinking, navigation navigation, naqshadeeynta SEO-saaxiibtinimo iyo qaabaynta maaddada. Hagaajinta goobta dibadda waxaa loola jeedaa istiraatiijiyada dhismaha isku xirka iyo farsamooyinka kale ee taraafikada sida SMM ama suuq-geynta e-mailka.
Si aad u hesho bogga ugu horeeya SERP, waxaad u baahan tahay inaad ka warqabto mabaa'diida SEO xitaa haddii aad shaqaaleysid shirkad internet-ka ah oo suuq-gaas ah si aad hawshan u qabato.
Sidee bogga ugu horeeya ee SEO u shaqeeyo?
Raadinta mashiinka raadinta waa hab lagu kordhiyo darajada boggaga ganacsigaaga iyo kor u qaadida garashadaada brandka. Haddii aad ogtahay sida loo hirgeliyo adeegyada ugu sahlan ee boggaaga saxda ah, ka dibna aad u badan tahay waxaad ku dari doontaa bogga ugu dambeeya raadinta Google. Si kastaba ha ahaatee, waxaad ka soo horjeedaa tartamayaasha badan ee Google SERP. Sidaas, waxaad u baahan tahay inaad fahamto in sameynta olole SEO ah ma aha mid fudud. Google waxay cusbooneysiistaa algorithm si joogto ah si ay u muujiso goobaha ugu muhiimsan ee TOP iyo ciqaabta xad-gudbaha heerka caadiga ah. Sida laga soo xigtay ciyaaraha SEO, website-yada kuwaas oo kasbaday "kalsooni" sareeya 10ka boos ee ugu horeeya ee Google. Waxaa intaa dheer, SEO wuxuu awood u leeyahay inuu hagaajiyo waayo-aragnimo user iyada oo goobta ah. Waa darajo kale oo Google ah. Shuruudaha ugu badan ee maalmahan waa inay lahaadaan wax tayo sare leh oo munaasab ah oo ku yaalla boggaaga kaas oo ka caawin kara isticmaalayaasha inay xalliyaan arimahooda raadinta. Waxaa intaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad ka dhigto goobtaada inay ka jawaabto qalabka kala duwan ee mobile. Waa weedho kale oo Google ah oo ah darajo udubdhexaad kaas oo ah WAA LA HELAY mawqifka TOP. Mid ka mid ah farsamada wax-ka-beddelidda mashiinka raadinta oo aanad iska indha-tiri karin waa dhisme xiriiriye. Waa habka kaliya ee kor loogu qaado awoodda shabakadda ee indhaha Google. Iska hubi in aad isku-xidhkaada ku dhejiso aaladaha sumcad leh ee ka jira suuqa oo ka badan labo sano. Si looga fogaado inuu ku dhaco mawduucyada xun ee Google, sii joogso oo la soco cusbooneysiinta ugu dambaysa iyo shuruudaha bogagga internetka.